အမျိုးသမီးများအတွက်ချည်မျှင်အင်္ကျီ ရပ်ဘီဆိုင်: Sexy Rugby
ကြိုဆို » ချွေးထွက် Hoodie
Le ချွေးထွက်အမျိုးသမီးများနေ့ Sexy ရပ်ဘီ အလွန်ယဉ်ထည် 280 g / m²သို့တီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဝါယာကြိုးနားကြပ်နှင့်လက်အားအခမဲ့ပစ္စည်းများပူးတွဲခွင့်ပြုထားတဲ့အတွင်းပိုင်းအိတ်ကပ်နှင့်အပါးပျဉ်းမှာသေးငယ်တဲ့အနားကွပ်ပါရှိပါတယ်။
အမြိုးသမီးမြားအဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ချွေးထွက် hoodie ပန်းရောင်ကြည်လင်အလင်းပူစီနံအစိမ်း, အပြာဂျင်း, မီးသွေးမီးခိုးရောင်, အဖြူရောင်, အနက်ရောင်, ရေတပ်ပြာ, ခရမ်းရောင်, မီးခိုးရောင် marl နှင့်အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကိုကြွလာ burgundy ။ S က, M, L, XL နှင့် XXL: အပြင်, သင်တို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအမျိုးအစားများကို fit မှအတော်ကြာအရွယ်အစားကိုရှာပါ။ ဤသူသည်သင်တို့ညီဆုံးနေ့စွဲပေါင်းစပ်ဖန်တီးနှင့်သင်ကိုယ်တိုင်ဆက်ဆံပါ!
မိန်းမတို့အဘို့ဤသည်ချွေးထွက် hoodie ခြောကအများဆုံးဝေးရောင်းရောင်းအားအကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ် Sexy ရပ်ဘီ, ပါ! ဒါကြောင့်အဘယ်ကြောင့်မပေးသငျသညျ?
ဒါကချွေးထွက်ရပ်ဂ်ဘီ hood ကိုအရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်ကိုဆိုလိုတာပါ။
ကြီးမားပြီးသေးငယ်နှစ်ဦးစလုံးလိုအပ်ချက်များမှကိုက်ညီအရွယ်အစား၏ကျယ်ပြန့်ရွေးချယ်မှု။ အဆိုပါ hood ကိုချွေးထွက် Sexy အမျိုးသမီးများနေ့ရပ်ဘီအားလုံးအခြေအနေများတွင်၎င်း၏အထူနဲ့အပျော့ပစ္စည်းမှကျေးဇူးတင်စကားနွေးထွေးမှုနဲ့နှစ်သိမ့်ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါအရောင်တီးဝိုင်း Pass ကိုကဲ့သို့တူညီသောအရောင်မှမတူဘဲ drawstring
ခံနိုင်ရည်ထည်: 280 g / m²
ဖွဲ့စည်းမှု: 80% ဝါဂွမ်း, 20% polyester (မီးခိုးရောင် Heather: 85% ဝါဂွမ်း, ထဲမှာပါတဲ့ 15%; အပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီ, အလင်းအစိမ်းရောင်ပူစီနံနှင့်မီးသွေး: 60% ဝါဂွမ်း, 40% polyester)
sexy ရပ်ဘီလည်းကမ်းလှမ်းမှုများ လူတို့သညျအဘို့အရပ်ဘီချွေးထွက် hoodie .